ဖလော်ရင့်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖလော်ရင့်မြို့ (/ˈflɒrəns/ FLORR-ənss; အီတလီ: Firenze [fiˈrɛntse] ( နားဆင်))[မှတ်စု ၁] သည် အီတလီနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း တစကန်နီဒေသ အတွင်း တည်ရှိသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေသတွင်း တစကန်နီဒေသ၏ မြို့တော်ဖြစ်ကာ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးသောမြို့ လည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၃၈၃၀၈၄ ဦး ရှိပြီး မြို့ပြဧရိယာ ၁,၅၂၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ထိပ်ဆုံးဝဲဘက်မှ လက်ယာရစ်: A collage of Florence showing the Galleria degli Uffizi (top left), followed by the Palazzo Pitti,asunset view of the city and the Fountain of Neptune in the Piazza della Signoria. ၏ မြင်ကွင်းပုံ
ဖလော်ရင့်မြို့ သည် အလယ်ဥရောပ ခေတ် ၏ ကုန်သွယ်ရေး ဗဟိုချက်မ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုခေတ်အခါက ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမြို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ထို့အပြင် အတတ်ပညာရှင် အများအပြား ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာမြို့လည်း ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ၁၈၆၅ခုနှစ် မှ ၁၈၇၁ခုနှစ် အထိ အီတလီဘုရင့်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖလော်ရင့်မြို့ သည် နိုင်ငံခြားသားများ အား ဆွဲဆောင်နိုင်သောမြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် အလျောက် ဖလောရင့် သမိုင်းဝင်ဌာန အား ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
↑ Obsolete Tuscan form: Fiorenza [fjoˈrɛntsa], from လက်တင်: Florentia.
↑ Economy of Renaissance Florence, Richard A. Goldthwaite, Book – Barnes & Noble။ Search.barnesandnoble.com (23 April 2009)။4April 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Firenze-del-rinascimento: Documenti, fotoecitazioni nell'Enciclopedia Treccani။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖလော်ရင့်မြို့&oldid=639975" မှ ရယူရန်
၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။